Itoobiya: Hubinta lagu sameeyey sawiro aan sax aheyn oo la xiriira cunno yarida ka jirta gobolka Amxaarada - Bulsho News
Emine Erdogan: Xaaska Erdogan maxay Soomaaliya uga shegetay buuggeeda cusub...
Itoobiya: Hubinta lagu sameeyey sawiro aan sax aheyn oo la xiriira cunno yarida ka jirta gobolka Amxaarada
Thousands of civilians displaced by fighting in Amhara are relying on humanitarian aid
Dagaaladii ka dhacey gobolka waqooyiga ee Tigrayga, ayaa ku fidey gobolka ay dariska yihiin ee Amxaarada, taas oo barakicisay boqollaal kun oo qof, oo wajahaya cunto la’aan.
Sawiro lagu baahiyey baraha bulshada, ayaa muujinayey carruur iyo haween ay ka muuqato nafaqo darro.
Ha yeeshee sawirada qaarkood ayaa wakhti hore laga qaadey goobo kale – sida Soomaaliya, gobolka Tigrayga iyo xitaa abaartii ka dhacdey dalka Itoobiya, sannadkii 1984-tii.
Illaa iyo heerkee ayey gaarsiisan tahay Cunno yarida soo food saartay gobolka Amxaarada?
Dowladda Itoobiya, ayaa sheegtay in tirada dadka ku barakacey dagaaladii dhawaantan ka dhacey gobolka Amxaarada in ay ka badan tahay 500,000, iyadoo dadka sida weyn ugu baahan cuntada ay ka badan yihiin hal milyan oo qof.
Waxoogaa cunto gargaar ah ayaa gaarey gobolka, laakiin dowladda waxay intaa ku dartay in galitaanka goobahaas ay yihiin qeybaha ugu halista badan ee gobolka Amxaarada, gaar ahaan waqooyiga degmada Wollo, taas oo mucaaradka ay dhibaato weyn u geysteen.
Afhayeenka ra’iisal wasaaraha Itoobiya, Billene Seyoum, ayaa sheegtay in Xoogagga TPLF ay uga sii dareen xaaladda bani’aadanimo, maadaama ay “caqabad ku noqdeen gargaar gaarsiinta shacabka.”
The number of those fleeing fighting in Amhara has been increasing
Dagaal yahanada TPLF ayaa iska diidey warka dowladda, iyagoo ku eedeeyey maamulka Abiy Axmed inay goobahan saareen cadaadis weyn, sidoo kalana ay ka jareen war isgaarsiinta iyo korontada.
Hey’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhanka cuntada (WFP), ayaa sheegtay in boqolaal kun oo dad ah oo ku sugan qeybo ka mid ah gobolka Amxaaradada ay cunno yari soo food saartay, inkastoo aanay gaarsiinin heer abaar iyo cunno la’aanta ba’an.
Sida ay sheegtay WFP, wali waxaa sii socdo weerrarada, waxaana adag qeybo badan in la galo, iyadoo ay ugu wacan tahay dagaallada, waxaa aad u sii xumaaday dhibaatada cunno yarida ee goobahan.
Sawiro aan run aheyn
Waxaan ogaanay inay jiraan sawiro marin habaabin ah, kuwaas oo loo isticmaalay olole lagu soo jiidanayo dareenka hey’addaha gargaarka ee xaaladda la xiriirta ee gobolka Amxaarada.
Sawirada la soo galiyey baraha bulshada, gaar ahaan barta twitter-ka, waxay si weyn ugu dhex baaheen bulshada, laakiin ma ahan sawiro gobolka Amxaarada laga soo qaadey xilliyada lagu sheegayo.
Sawirada waxaa la ogaaday inay ahaayeen kuwo la qaaday sannadkii 2011-ka, kuwaas oo loo isticmaalay warbixino looga hadlayey abaar ka dhacdey gobolka Soomaalida ee Itoobiya.
Sawirada qaarkood ee farriinta soo socota ee Twitter-ka, ayaa muujinaya inay yihiin kuwo aan sax aheyn.
Sawirka bidixda ayaa laga qaaday Soomaaliya, waana xero dad barakacayaal ah oo ku taallay koonfurta caasimadda Muqdisho, sannadkii 2011-kii.
Sawirka uu ka muuqdo ilmaha yar ee dhulka yaalla, waxaa isna la qaadey bishii May ee sannadkan 2021, waxaana laga qaaday isbitaal ku yaalla magaalada Mekelle, oo ah xarunta gobolka Tigrayga.
Laakiin sawirka saddexaad, ayaa ah mid dhawaan la qaaday oo muujinaya inuu yahay gobolka Amxaarada. Waxaa laga soo dhex saarey video, ay soo gudbisay horraantii bishan warbaahinta Amxaarada, iyadoo lagu qeexay haweeney barakac ah waqooyiga Wollo.
Farriinta la soo galiyey barta bulshada ee Twitter-ka, ayaa lasii baahiyey in ka badan 10,000 oo jeer.
Farriintan oo dhanka barta twitter-ka laga soo xigtey, ayaa la baaray waxayna ka muuqataa dhanka hoose, taas oo ku lifaaqan sawir muujinaya haweeney iyo carruur ka soo jeeda gobolka Amxaarada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaaday in markoodii ugu horreysay loo isticmaaley sheeko la baahiyey bishii May ee sannadkan, oo laga soo tabiyey gobolka Tigrayga. Waxey la xiriirtaa koox dad ah, kuwaas oo ku sugnaa iskuul ku yaalla Mekelle, ka dib dagaallo markaa dhacayey.
Midka ugu danbeeya, oo ah sawir la isla wadaagey oo si weyn ugu dhex baahey warbaahinta, waxaa lagu tilmaamay in uu la xiriiro cunno yari ka jirta gobolka Amxaarada. Laakiin waa sawir laga qaadey abaartii ka dhacdey Itoobiya, sannadkii 1984-tii, taas oo ay ku dhinteen boqolaal kun oo qof.
Aragtida garyaqaannada Soomaaliyeed ee go’aankii Maxkamadda ICJ
Mustafa Cagjar oo markale loo doortay Madaxweynaha Dowlad...